Barruu mul'achuu qabu harka bitaa irraantoo yookiin jalaantootti galhi.
Barruu mul'achuu qabu mirga irraantoo yookiin jalaantooti galchi.
Irraantoo yookiin jalaantoo durmurtaawe tarree keessaa filadhu.
Dhangiiwwan barruu haraa yookiin filatametti moggaasuuf qaaqa bana. Qaaqni Amaloota Barruu fuulota caancalaa Bocquu, Galteewwan Bocquu and Qubannoo Bocquuof keessatti qaba.
Iddooqa maqaa faayilii bakka filatametti galcha. Mata duree galchuuf hantuutee cuqaasi.Cita baafataa keesaa mata duree, maqaa faayilii yookiin maqaa xurree/faayilii filachuuf cuqaasa dheeraa taasisi.Yoo mata dureen hin moggaafamne ta'e (Faayilii - Amalootsa ilaali), bakka isaa maqaan faayilii ni seena.
Iddooqa maqaa wardii irraantoo/jalaantoo galmee sirrii keessa jiruun bakka bu'e irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.
Iddooqa lakkaawwii fuulaan bakka bu'e naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.
Iddooqa lakkoofsa fuulotaa galmee keessa jiran hundaan bakka bu'e naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.
Iddooqa guyyaa ammee irraantoo/jalaantoo tokko tokkoo fuula galmee irra jiru keessatti irra deebi'amu,naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.
Iddooqa yeroo ammee irraantoo/jalaantoo tokko tokkoo fuula galmee irra jiru keessatti bakka bu'e,naannoo irraantoo/jalaantoo filkatame keessa galcha.
Title is: Irraantoo/Jalaantoo